Maqaal: Maxaad Ka Ogtahay Ereyga La Iskuma Qoslo & Soomaalida K/Afrika ?, By C/raxmaan Codeey
MAQAAL CAJIIB AH - RN - Marka ugu horeeyso oo qofka yimaado k/afrika wax yaalaha ugu hureyo oo maqlayo waxa kamid ah kalmada “la’isuma qoslo“, waana wixii ugu horeeyey oo la igu yiri markii aan imid k/afrika hal sano iyo bar ka hor , balse jawaab aan si lama filaan ah u bixiyey ayaa noqotey xaqiiq aan la iska indho tiri karin.
Jawaabta aan bixiyay ayaa aheed “hadii aan leysku qoslin waa la isku ooy doona”.
Ula jeedada aan u soo qaatay erayga ah ”La’iskuma qoslo” ayaa ah in aysan Soomaalida wax naxariis ah aysan kujirin qofba dantiisa kaliya uu fiirsado, micnaha la’isuma qoslo ayaa ah in wax farxad ah uu san ku muujin sida qofka sxbkaa ah ama qaraaba aa tihiin taa ayaa keentay in aan la’isu qoslin k/afrika.
Markii aan soogaaray wadanka K/Afrika qofkii ugu horeeyey oo aan la kulmay waxa uu ahaa saaxiibkeeyga qaali ah, salaan kadib ayuu waxu igu dhahay saaxiibkeey Codeeyoow dalkani Koonfur Afrika “La’iskuma qoslo” .
W/D: Cabdiraxmaan Muumin (Codeey)